5 MATINJI EKUCHENGETEA MAgirazi AKO - THE INDIAN FACE
Ichokwadi kuti, nekuda kwemitengo inokwanisika yemagirazi emhando yatinayo mukati mekusvika kwedu mumusika nhasi, tinoda kuve nemamodheru akati wandei kuti tive nesarudzo yekuasanganisa nemhando dzakasiyana dzatinofunga zuva nezuva uye mafungiro edu akasiyana.
Chete mune imwe yemhando dzedu, The Indian Face, tinokupa anosvika gumi nemapfumbamwe emhando dzemagirazi ayo, kana awedzerwa neakasiyana mavara akasiyana ega ega, gadzira huwandu hwezvakawanda zvakasiyana sarudzo, izvo zvaunoda kuva nazvo, nemutengo mumwe uye wakakodzera kupa mhando yakanaka, zvese zviri zviviri. mumalenzi ekudzivirira maziso ako, sezviri muzvinhu zvinovatsigira uye kushongedza chiso chako. Magirazi lenzi The Indian Face, ivo iTAC polarTsanangudzo yakakwirira inosimudza, kunaka 3 kudzivirira uye mheni UV400 uye furemu yakagadzirwa nepolycarbonate inopa kureruka kwakanyanya. Kupa ruzhinji kukosha kwemari kusingakundiki.
Nesarudzo dzese dzakasiyana dzinounzwa pamberi pemeso edu muchimiro chemhando dzedu dzakasiyana, Alpine, Hookipa, Mweya, Ushuaia, Mupata, Free Spirit, kwekumaodzanyemba, Kahoa, Polar, Reef, Freeride, nzvongo, Oxygen magazini, Ventura, Southcal, Noosa, Kailani, Nunkui o TarifaZviri nyore kuti uwane yakanaka yekuchengetedza sisitimu yemagirazi ako kuitira kuti irege kushatisa uye kuchengetedza kugona kwavo kwakaringana, pamwe nekukubvumidza iwe kuti uve nawo mukuona kwesarudzo yakanakisa muhupenyu hwako hwezuva nezuva.
Zvese zvekumba uye kuzvitora mumugwagwa, tinokupa dzimwe sarudzo dziri nyore, kuti iwe ugone kuzvigadzira iwe pachako. Uye kubva padiki kusvika padanho rakakura rekuomerwa, isu tichakuudza pazasi akati wandei mazano ekuita varongi vemagirazi ezuva.
Kune ese manomano aya, iwe uchaona kuti iyo diki inopisa silicone pfuti iyo inoshandiswa pamhizha ndiyo ichave mubatsiri wako mukuru. Kana iwe usina, unogona kushandisa mvura silicone kana kugadzwa kweAmerica.
1. HANGERI - MAGAZINI HANGER
Wooden hanger kana chero chaunoda.
Diki inopisa silicone pfuti.
Decorative jira kana trimmings tepi.
Iwe unogona kusarudza imwe yako yakanakisa hangers yemapuranga kana kunyange iyo yakarongedzerwa nejira kana uine, kana imwe mhando yehanger yaunoda. Kuti uishongedze, namatira nesilicone inopisa mupendero webhendi rekushongedza kana tepi, panzvimbo yakaderera yekona yekona iyo inoumba hanger, pane chikamu chausingadi kuona, uye kuputira tepi kupoteredza bhari. pasina kusiya nzvimbo pakati payo. Iwe unogona kushongedza chete chikamu chepasi apo iwe ucharembera magirazi kana hanger yese. Pakupedzisira, gadzirisa magumo zvakare nesilicone muchikamu chimwe chete chawakagadzirisa kutanga, icho zvino chichava chikamu chemukati. Nenzira iyi tichava nechokwadi chekuti magumo haaonekwe. Nekuda kweizvozvo, iwe unozokwanisa kuturika magirazi ako ese kubva mutemberi uye kuita kuti ese aonekwe zviri nyore uye kuti ma lens haana kukweshwa. Iwe unogona kuisungirira muwadhiropu yako nehembe dzako, kune imwe mugumo kuti uzviwane zviri nyore, kana kutoisungirira pamadziro semufananidzo.
2. DRAWER REKURONGWA - RUPANISI
5 mm furo bhodhi.
Diki inopisa glue pfuti kana mvura silicone.
Pfungwa yacho ndeyekudurura imwe yedhirowa yako kana hafu yeimwe yacho, zvichienderana nemagirazi aunoda kuronga uye ukuru hwedhirowa rako. Nenzira iyi, isu tichayera nzvimbo yatinoda kushandura kuva murongi wegirazi uye isu tichagadzirisa kadhibhodhi senheyo kuchiyero.
Zvadaro tinotora zviyero zvemipendero yekadhibhodhi zvakare uye tinocheka mativi mana anodiwa kuti aite contour kuyera uye kunamatira iwo akamira neinopisa kana yemvura silicone, sezvo inopisa ichioma nokukurumidza. Tinosvina masekonzi mashoma kusvika yaoma.
Kuti tiite vapatsanuri, isu tichayera nekucheka chikamu chepakati kureba uye tochinamira pamwechete. Tinofanira kunyatsotarisa kuti ingani inokodzera, kuyera nemagirazi mamwechete atinoda kuisa, asi kazhinji 6-7 masentimita pakati pemagirazi nemagirazi zvakakwana. Isu tichacheka kupatsanura kusvika saizi mufoam board uye toanamatira zvakare.
Isu tinoisa chimiro chose pazasi pedhirowa uye, nenzira iyi, tinogona kugovera magirazi.
3. FRAME - TAFURA
Mufananidzo usina furemu, werudzi rwunoonekwa canvas, kazhinji kacho mufananidzo wakadhindwa, kana furemu yependi yausingachashandisi.
Satin ribhoni yemuvara waunoda.
Duct tape kana inopisa silicone.
Zvichave zvakakosha kuisa matepi akanamirwa kuseri kwefuremu kana mufananidzo, akasara akafuratira ane duct tepi kana inopisa silicone, uchiisa matepi pamusoro kuti uone kureba kwayo usati wacheka uye kuyera kuti chiratidziro chinotora chii kana uchirembera kubva patemberi. kukwanisa kuisa tepi inotevera pasi. Kana yapera, inorembera zvakanaka pamadziro, asi kana iri canvas isina furemu unogona kuimisa pachipfuva chedhirowa.
4. RATIDZO YEMAGIROZI
Midziyo yawakadzokorora uye inokodzera magirazi, asi iwe unogona zvakare kuwana yakachipa zvakanyanya kubva kubhazaar, senge iyo yebhota, sezvo ivo kazhinji vane saizi yakanaka yekuisa magirazi ako mukati.
Base yauinayo uye unoda kuigadzira kumira kwechiratidziro, senge chibatiso chekenduru.
Panguva ino ndezvekuva zvishoma kugadzira uye kusarudza zvinhu zvaungade kuti zvionekwe mukamuri yako.
Kutanga isu tichabatanidza midziyo pamwe chete nekuiisa mumutsara uye kudivi, tichigadzira kaviri mapaneru. Kuvaisa vakatarisana, tichaona kana vese vakabata kubva kumashure uye neiyo inopisa silicone isu tichaita mapoinzi kuti vabatane. Kana vasingabatanidze mumwe nemumwe kuti avhare chinhambwe ichocho, isu tinotanga taisa huwandu hwesilicone pea pamupendero wega wega kuti tibatanidze chinhambwe chavanoshaya kubata uye isu tichachirega chiome kuti chiome. Zvadaro tichawedzera imwe yakaenzana pamusoro kuti tibatanidze pamwe chete. Kana imwe chete iyo yose yakabatanidzwa pamwe chete uye silicone yakaomeswa, kana tichida kushongedza contour nemucheka wekushongedza, tinogona kuzviita ikozvino.
Gare gare, isu tichaibatanidza sechivharo kune yedu yakasarudzwa rutsigiro zvakare nesilicone. Kana yaoma, taiva netaundi yakashongedzwa uye yakamira kuti tigare patafura.
5. EVA RUBBER COVER KUTAKURA MAGALASI AKO
Mapurasitiki akaita triangular.
Shinda yakakora kana makushe.
Brooch kana kuti flat shape yatinoda kushongedza nekumaka evha rabha.
Iine tambo ye40 cm kureba x 12 cm yakafara evha rabha, inokwana kukwana chero yeako magirazi ezuva. The Indian Face.
Mapurasitiki akaita mativi matatu anofanirwa kuita masendimita maviri pasi pekupamhama pane eva rubber strip uye imwe nehafu centimita yakafara. (Dzinogona kugadzirwa kubva pachivharo chekare che tupper yaunayo). Unodhirowa zviyero, zvidimbu zviviri zve10cm x 1,5cm kana 12cm x 1,5cm, wozvicheka. Kana iyo purasitiki yakanyanya kutetepa, unogona kuicheka kaviri uye kuinamatira nesilicone inopisa pamwe chete, kuitira kuti iwedzere kupikisa kana uchidzvanya kuvhura chivharo kubva kumativi.
Tichabatanidza chidimbu chepurasitiki pamicheto miviri yenzvimbo yakamanikana, tichisiya 2 mm yenzvimbo kubva kumucheto we eva rubber, uye ipapo tichaipeta nekuinamatira mukati kuitira kuti plastiki ivanzwe.
Tichaisa silicone pamipendero yakareba nepfuti uye tichapeta muhafu chaiyo kuitira kuti vabatane pamwe chete.
Zvadaro tichashongedza chikamu chekunze chevhavha nesimbi yesimbi kana bhatani nekuyamura kwakanaka, kwaimbove kuchipisa nekupisa kwekenduru asi pasina murazvo unopfuta kana kuishandura dema. Gare gare tichaidhinda pavhavha yevhavha yevhavha, tichigadzira mutsara wemifananidzo padivi nepadivi uye kuwedzera mitsetse kusvika paunoda.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuishongedza zvakanyanya, netsono yemvere uye neshinda ine ruvara kana shinda gobvu yaunonyanya kufarira, tanga kusona pasi penzvimbo yepurasitiki. Viga pfundo rekutanga musono kubva mukati uye kubva ipapo 3 mm kubva kumucheto kumativi ose evhavha kusvikira wasvika kune imwe mugumo pamberi pezvidimbu zvepurasitiki.
Kana wapedza, unogona kuvhura kesi uye kutora magirazi ako aunoda mubhegi rako pasina kukuvadza, kana kutora nzvimbo yakawandisa kesi yakaoma.
Iye zvino une nhevedzano yese yekuvaraidza uye inosimudzira mhizha ine chokwadi chekupa aunofarira magirazi ezuva hupenyu hurefu uye izvo zvinokutendera iwe kuti uve nazvo zvakarongeka uye zviri pedyo. Tinokukurudzira kuti uzviedze kuti uratidze kuti wazviita iwe pachako.
NDOKUTARIRA SEI MAgirazi AKO?
Kuti magirazi ako arambe ari muchimiro chakanaka, unofanira kuva nelenzi dzakachena, kana zvichibvira neine mvura chaiyo yekuchenesa magirazi kana, kana usina, ine cologne. Iyo cologne inovasiya yakachena pasina kushatisa, ichiisa nejira rakanaka re microfiber yemagirazi, sezvo hengechepfu nemanapkins zvine magirazi madiki anogona kuakwenya kana kushandiswa kwakarebesa nekufamba kwenguva. Kana dzanyanya kusvibiswa, dzigeze zvakananga nemvura uye nesipo. Iyo tauro zvakare inzira yakanaka yekuomesa mune iyo kesi.
Paunenge usiri kuashandisa, unofanirwa kuzvichengeta mune anoronga kana mune imwe kesi kuitira kuti makristasi asakwekwe, kana kuti vanotambura tsaona.
Usambofa wakapfeka iwo akarembera kubva pamutsipa, nekuti kubva ipapo ivo vanodonha uye vanogona kuvhunika, mune izvi zviitiko makristasi anoputika nyore. Usazvipfekedza mumusoro wako, nekuti zvinosvibisa uye zvinobata nebvudzi rako.
CHETE NEI MAZISO AKO?
Kuva nekudya kwakanaka kunokosha pahutano hwemaziso. Chikafu cheMedithera chinofarira kudya uku kwakaringana, saka tora mukana uye uchengete mupfungwa zvekudya zvakaita se: mafuta emuorivhi, mhodzi dzesunflower nesoya beans, mhiripiri tsvuku, maranjisi, mazai, broccoli, makarotsi, nzungu, hove dzebhuruu, uye zvigadzirwa zvemukaka. Zvokudya izvi zvese zvakapfuma muvhitamini A, C, D, uye zvinodzivirira zera remacular degeneration izvo, pamwe chete nechirwere cheshuga, ndizvo zvinonyanya kukonzera kurasikirwa kwekuona.
Kuva neutano hwakanaka kunokoshawo zvikuru, kudzivisa kuwandisa, BP kana kuti high cholesterol. Kurovedza muviri nguva dzose kunoenderana nezvatinoda kunobatsira kuti tisava nehanya nazvo.
Pfeka magirazi ezuva emhando yepamusoro seatinokupa mukati The Indian Face ichagara iri yakanakisa sarudzo.
ITSIKA DZIDZO dzingakuvadza MESO EDU?
-Kusadya, kunyanya kudya kwemangwanani, nekuti mwero weshuga muropa unodzikira.
- Cheka svutugadzike pakati pekudya, nekuti ivo vanopa isina macalorie.
-Kushandisa shuga dzakanatswa kana mafuta akazara.
- Kusawana kuzorora kwakakwana, sezvo zvichikonzera kushushikana kwemaziso.
- Inwa doro, nokuti inoderedza kutenderera kweropa.
- Kudya nekukasira, nekuti haakubvumidze kuti utore chikafu zvakanaka.
NDOKURONGWA SEI MAgirazi ANGU?
Kuti uchengetedze magirazi ako ezuva akarongeka, kune mazano akareruka akadai sekuasungirira pahanger iyo inokubatsira kuti magirazi ako asaora uye arambe achiona.
Kubvisa dhirowa uye kugadzira nzvimbo yekuaronga uye kuve nemamodheru ako ese mukuona zvakare isarudzo yakanaka.
Sei mitambo yakanyanyisa kupindwa muropa?
70% yemazuva edu anoshandiswa pamberi pechidzitiro, tichisiya huropi hwedu mune otomatiki maitiro. Nekudaro, iwe kana iwe uchipa iyo yakachena adrenaline kumhanyisa, zvese zviri mukati medu zvinogadzirisa.